उच्च स्कोरका बाबजुद पनि नेदरल्याण्डसंग हार्यो नेपाल — Sanchar Kendra
१ओली र नेपालबीच सिंहदरबारमा वार्ता सुरु, अरु को को छन् सहभागी ?
२कोरोना संक्रमणबाट एकैदिन २०३ जनाको मृत्यु
३ओली र नेपालबीच सिंहदरबारमा वार्ता हुँदै
४पछिल्लो २४ घण्टामा थप ८ हजार ५२० जनामा संक्रमण पुष्टि
५ओलीसँग चपलीहाइटमा भएको थियो यस्तो गोप्य सहमति, माधव नेपाल आफैले गरे सनसनीपूर्ण खुलासा
६सपथ लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो प्रतिक्रिया, कसलाई के भने ?
७मकवानपुरमा थप १ सय ९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, पर्सामा पनि बढ्दै
८सपथ लिँदालिँदै जब प्रधानमन्त्रीको मुखबाट राष्ट्रपतिसामु चिप्लियो यस्तो शब्द, त्यसपछि जे भयो…
९रुपन्देहीमा थप दुई जना संक्रमितको मृत्यु, गण्डकीमा संकट झन् बढ्दै
१०विवाहभोज खाएपछि कोरोना संक्रमण, एकै घरका ३ जनाको मृत्यु
११ओलीले सपथ ग्रहण गरेलगत्तै प्रचण्ड र नेपालबीच गोप्य भेटवार्ता, के बिषयमा भयो कुराकानी ?
१२तिब्र गतिमा फैलिदै कोरोना, बाँकेमा दुई घण्टामा ५ संक्रमितको मृत्यु
उच्च स्कोरका बाबजुद पनि नेदरल्याण्डसंग हार्यो नेपाल
काठमाडाैं । काठमाडाैंमा जारी त्रिकोणात्मक टी-२० सिरिजमा नेपाललाई नेदरल्याण्डले हराएको छ। नेपालले दिएको २ सय ७ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्याण्ड्सले ३ बल बाँकी हुँदै ७ विकेट गुमाएर लक्ष्य पुरा गर्यो।
त्रिवी क्रिकेट मैदानमा मंगलबार भएको खेलमा नेपाललाई नेदरल्यान्ड्सले ३ विकेटले हराएको हो। यो नेदरल्यान्ड्सले आफ्नो टि२० आई इतिहासकै सर्वाधिक विशाल लक्ष्य पूरा गरेको हो ।
उसका लागि बासडी लिडेले अविजित ८१, बेन कपूरले ५५, कप्तान पीटर सीलारले ३१, टोबिएस भिसेले १५ रन बनाए । बलिङमा सन्दीप लामिछानेले चार, कुशल मल्ल, अविनाश बोहरा र करण केसीले एक/एक विकेट लिए ।
यसअघि, कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर २ सय ६ रन बनाएको थियो। नेपालका लागि उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी र कुशल भुर्तेलले अर्धशतकीय पारी खेले।
कुशलले ४६ बलमा आठ चौका र एक छक्कासहित ६२ रन बनाए । जारी सिरिजमा उनको यो लगातार तेस्रो अर्धतकीय पारी हो । योसँगै कुशलले डेब्यू टी-२० सिरिजमै लगातार तीन अर्धशतक बनाउने विश्वकीर्तिमान पनि बनाएका छन्।
त्यस्तै, उपकप्तान ऐरीले ३० बलमा पाँच छक्का र तीन चौकासहित ६० रनको योगदान दिए । टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा उनको यो पहिलो अर्धशतक हो । कुशल मल्लले पनि आक्रामक ब्याटिङ गरे ।
उनले सात बलमा तीन छक्काको मद्दतमा १८, कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले २०, विनोद भण्डारीले सात र सोमपाल कामीले अविजित २१ रन बनाएका थिए। बलिङमा नेदरल्याण्डका भिभियन किंग्मा, कप्तान पीटार सीलारले दुई/दुई, बासडी लिडे र आर्यन दत्तले एक/एक विकेट लिएका थिए।
कोलकता र बैंग्लोरबीचको खेल स्थगित
दिल्लीलाई १ रनले हराउँदै बैंगलोर शीर्ष स्थानमा
नेपाल सुपर लिग- काठमाडौंको सुखद शुरुवात
कुशल भुर्तेलले उछिने विराट कोहलीलाई
घरेलु मैदानमा नेपालले जित्यो त्रिकोणात्मक टी-२० सिरिजको उपाधि
नेपाल सुपर लिग आजदेखि, नेपाली फुटबलको इतिहासमा नयाँ प्रयोगको सुरुवात
त्रिकोणात्मक टी-२० सिरिज- उपाधिका लागि नेपाल र नेदरल्यान्ड्स भिड्दै